बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने युवतीलाई कैद सजाय, फरार युवती खोज्दै प्रहरी - नेपालबहस
बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने युवतीलाई कैद सजाय, फरार युवती खोज्दै प्रहरी
| २०:४१:५५ मा प्रकाशित
३० भदौ, सुर्खेत । महिला मैत्री कानुनका आधारमा नक्कली बलात्कारको आरोप लगाएर पैसा असुल्ने धन्दा चलाउने युवतीहरुका लागि नराम्रो खबर आएको छ । पछिल्लो समय बलात्कारको ग्राफ बढेको प्रहरी तथ्याङ देखिएपनि वास्तविक बलात्कारको संख्या भने न्युन नै रहेको छ ।
दैनिक समाचारमा आउने बलात्कारका घटनामध्ये अधिकांश लेनदेन, झगडा लगायतका विविध कारणले हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । महिला अधिकारको दुरुपयोग गर्दै बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने एक युवतीलाई जिल्ला अदालत सुर्खेतले कैद सजायको फैसला गरेको हो ।
ती युवतीलाई अदालतले एक महिना कैद र १५ सय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । उनले तत्कालीन साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन सुर्खेतका प्रमुख रामप्रसाद गुप्तालाई बलात्कारको झुटो आरोप लगाएर पैसाको बार्गेनिङ गर्ने गरेकी थिइन् ।
गत असोज २८ र ३० गते गुप्ताले कार्यालयमै बोलाएर बलात्कार गरेको भन्दै ती युवतीले मंसिरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा उजुरी दिएकी थिइन् । युवतीले जागिर लगाइदिने भन्दै गुप्ताले यौन शोषण गरेको वकपत्रमा उल्लेख छ । तर उक्त वकपत्र नै झुटो भएको ठहर गर्दै अदालतले फैसला गरेको अदालतका श्रेस्तेदार यमप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।
गत भदौ १४ गते जिल्ला अदालतले एक महिना कैद र १५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी फैसला गरेको श्रेस्तेदार बाँस्कोटाले जानकारी दिए । ‘यो गम्भीर आरोप हो । जबरजस्ती करणीको आरोप लगाएर कसैको जीवनमाथि खेलवाड गर्नुहुन्न । अदालतले ती युवतीलाई कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ,’ श्रेस्तेदार बाँस्कोटाले भने ।
कैद सजाय फैसला भएकी १८ वर्षीय युवती सुर्खेतको बराहतालकी हुन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ ९क० अनुसार फैसला भएको श्रेस्तेदार बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
अदालतको फैसलापछि ती युवती फरार भएकी छन् । ‘फैसला भएदेखि ती युवती सम्पर्कमा आएकी छैन्न । कैद भुक्तान तथा जरिवाना असुल गर्न पक्राउका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई पत्र पठाइएको छ,’ उनले भने ।
१२ वर्षिया बालिकामाथि दुई दिनसम्म बलात्कार, हत्या गरेर सुन समेत लुटियो ! ४ दिन पहिले
सामूहिक बलात्कार गरी फरार रहेका १२ वर्षपछि पक्राउ ६ दिन पहिले
हाकिम भन्दै महिला कर्मचारीलाई बलात्कार गर्दै १ हप्ता पहिले
युवतीलाई बलात्कार गरेर फरार रहेका दुई जना ६ बर्षपछि पक्राउ २ हप्ता पहिले
आईपीएलमा मयंकको पहिलो शतक छायामा ! राजस्थानको किर्तिमानी जित ३ घण्टा पहिले
एट्लेटिकोको डेब्यु खेलमै लुईस स्वारेजको गोल ६ घण्टा पहिले
मयंकको शतकमा पञ्जाबले राजस्थानलाई दियो २२४ रनको लक्ष्य ६ घण्टा पहिले
पाटेबाघ ६ घण्टा पहिले
निरन्तरको वर्षाले ७७ घरमा क्षतिः २१५ उच्च जोखिममा ६ घण्टा पहिले
आजदेखि महानगरमा फुटपाथ पसल राख्न निषेध : नगर प्रहरी प्रमुख हाँछेथु ६ घण्टा पहिले
ब्याडमिन्टन हल उद्घाटन ६ घण्टा पहिले
आईपीएलमा मयंक अग्रवालको पहिलो शतक ६ घण्टा पहिले
मावि भवन उद्घाटन ७ घण्टा पहिले
बालगोपालेश्वर मन्दिर गजुुरको पर्खाइरमा ७ घण्टा पहिले
माथिल्लो चमेलियामा पाँच अर्ब १८ करोड लगानी ७ घण्टा पहिले
सनराइज बैंकमा क्युआर कोड स्क्यान गरि १० लाखसम्म झिक्न मिल्ने ७ घण्टा पहिले
कोरोनाले एक जनाको मृत्यु भएपछि नगरपालिका शिल ७ घण्टा पहिले
विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा डुङ्गामा सरर … ७ घण्टा पहिले
जसले १२ वर्षीया सम्झनालाई बलात्कार गरेपछि ढुंगाले मुखमा हानेर हत्या गरे ! १३ घण्टा पहिले
बजार प्रतिरोध क्षेत्रमा कायमै, प्राविधिक बिश्लेषणले के देखायो ? ११ घण्टा पहिले
भत्केको सिंचाई नहर पुर्ननिर्माणमा जुटे चापाकोट नगरका प्रमुख गिरि ७ घण्टा पहिले
आईपीएल २०२० मा सर्वाधिक छक्का हान्ने १० व्याट्सम्यान, धोनी र कोहली आउट ! ८ घण्टा पहिले
बसको ठक्करबाट स्कुटरमा चढेका श्रीमान, श्रीमति र छोराको मृत्यु ८ घण्टा पहिले
टस हारेर व्याटिङ थालेको पञ्जाबको शानदार शुरुवात ७ घण्टा पहिले